PUNTLAND DHAQAN LA BADELLO KU ADAKAA – Warsame Digital Media WDM. "GET USED TO FREE PRESS"
PUNTLAND DHAQAN LA BADELLO KU ADAKAA
Warsame Digital Media WDM April 30, 2019 May 1, 2019 Uncategorized
“Madaxweynuhu waa kan kaliya ee rasmiga ah, waana in lagala kulmo wax walba oo la xiriirra dawladda Puntland, Odayaashu waa in la raadsado si uu shaqsi kasta u bilaabo xirfad siyaasadeed iyo xirfad shaqo, midna waa inuu noqdaa qof diineed ama sheekh ah si uu Puntland ganacsado”
Kuwani waa qaar ka mid ah dabeecadaha dhaqanka ee si xoogan uga hirgalay Puntland 20kii sano ee ugu dambeysey ee is-dawladeed, oo ku salaysan aragtidayda shaqsiyadeed iyo khibradihii hore ee hababka Puntland.
Cidna ma noo sheegi kartaa wax faa’iido leh oo noocyada dhaqanka iyo ganacsiga ganacsiga ah u sameeyey inay u dhaqaaqaan Puntland?
Puntland waxay u baahan tahay dimuqraadiyeenta ee doorashooyinka dhinacyada badan, oo joojiya siyaabihii hore ee xukunka ninka keli ah. Puntland waa inaysan ku xirnayn ducada odayaasha beelaha aasaaskeeda. Odayaasha waa in laga fariisiyo siyaasadda si ay dib ugu noqdaan doorka taariikhiga ah ee nabadda ee nidaamyadooda qabiilkooda. Oday dhaqameedyada habka khaldan u galay maamulka Puntland ha istaagto. Puntland hoos ayey u dhacay, waano dhimatay doorka oday si ay u bixiyaan waxtar dheeraad ah dhanka siyaasadda.
Sidoo kale, Puntland waxay ubaahan tahay dhammaan noocyada maalgashiga ganacsiga qaranka, maxalliga ah iyo kuwa shisheeye, maaha maalgashi ay wadaan qayb ka mid ah bulshada oo keli ah. Dadka ganacsatadu hadda wey ka guurayaan Puntland, iyagoo iska indho-tiraya inay yimaaddaan Puntland markay arkeen, ayna la kulmaan caqabado ganacsi oo ay ka mid yihiin ganacsi kujira gacmo koox gaaray ah iyo dhiiranaanta ganacsiga iyo ganacsiga xorta ah oo aan jirin.
Waa in ay jirtaa daraasad culus oo ku saabsan canshuur iyo dhiirigelinta ganacsiga si ay u dhaliso koboca, kalsoonida macaamilka iyo shirkadaha ganacsi ee aan dhibaato lahayn. Amaashaha iyo dhibca deynta waa in la bilaabo lana dhiirigeliyaa. Isticmaalka alaabooyinka iyo adeegyadda gudaha laga soo saaro waa in la hormariyaa.
Tababarka Xirfadaha ayaa si aad ah Puntland loogu baahan yahay. Dugsiyada Xirfadlaha ah ee aan ka jirin Puntland. Dhalinyaradu waxay luminayaan aqoonsigooda maxaliga ah iyo ugu dambeyntii aqoonsiga qaranka marka aan la barin taariikhda qarankooda. Ceeb!
Waxaa jira waxyaabo badan oo la sameynkaro. Ma jiro qaran waligeed horumar weyn ka sameeyey arrima dhaqan-dhaqaale ee ku saleysan sadaqo iyo hay’adaha samafalka. Si aad u hesho qaran xoog leh, qof waliba waa inuu diyaar u yahay inuu sameeyo qaybtiisa iyo shaqada adag. Ma jiro wax weyn oo gaabis lagu gaaray.
Previous QAYLO DHAADAN KASOO YEEREESA BADWEYNTA
Next The Independence of Somaliland (Somalia)